Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Aerolíneas Argentinas sy Etihad Airways nanao sonia fifanarahana codeshare
Etihad Airways sy Aerolíneas Argentinas dia nanangana fiaraha-miasa codeshare vaovao.
Ao anatin'ny fifanarahana dia afaka mankafy fifandraisana mety amin'ny alàlan'i Roma sy Madrid mankany Buenos Aires (EZE) ny mpanjifa Etihad Airways ary hatrany amin'ny toeran-kafa malaza any Arzantina - Córdoba (COR), Mendoza (MDZ), Rosario (ROS), Iguazú (IGR ), Salta (SLA), Mar del Plata (MDQ), Bariloche (BRC), Trelew (REL) ary Ushuaia (USH).
Ho setrin'izany, ny vahiny Aerolíneas Argentinas dia afaka mahazo fidirana amin'ny tamba-jotra Etihad Airways misy toerana mihoatra ny 100 avy amin'ny foibeny Abu Dhabi amin'ny alàlan'ny renivohitra Italiana sy Espana.
Mohammad Al Bulooki, filoha lefitra mpanatanteraka ao Etihad Airways, dia nilaza hoe: "Ity codeshare ity dia maneho ny maha-zava-dehibe an'i Arzantina ho tsena fizahan-tany lehibe ho an'ny Etihad Airways any Amerika Latina noho ny fitomboan'ny fizahantany, kolontsaina ary ny raharaham-barotra misy eo amin'ny UAE sy Arzantina.
“Tianay ny hanome ny mpandeha sidina Aerolíneas Argentinas ny fotoana hankafizany ny serivisy malaza sy ny fandraisam-bahiny izay lazain'ny Etihad Airways manerantany. Ity codeshare ity dia hanamora kokoa ny traikefa. ”
Diego Garcia, Chief of Officer Aerolíneas Argentinas, dia nilaza hoe: "Fotoana tena tsara hanamafisana sy hampisondrotana ny tolotra ataonay amin'ireo foibe manan-danja indrindra ao Moyen Orient. Izy io koa dia ahafahantsika manatsara ny singa enta-mavesatsika, manatsara ny fampiasana ny fiaramanidina ary manamafy ny endrik'i Aerolíneas Argentina ao amin'ny tsena Aziatika. Manantena izahay fa io fifanarahana io ihany koa no ho vavahady hitsidihan'ny mpizahatany maro ny sasany amin'ireo mari-toerana manintona indrindra eto amin'ny firenentsika. ”
Ny fifanarahana Codeshare dia manolotra tombontsoa tsy tambo isaina ho an'ny mpanjifa, toy ny fidirana entana any amin'ny toerana farany alehany ary fanampiana fanampiny mandritra ny fifandraisana. Mpikambana ao amin'ny programa fahatokisana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka - Etihad Guest sy Aerolíneas Plus - tsy ho ela dia afaka mahazo sy manavotra kilometatra amin'ny sidina codeshare.